Home Wararka Guudlaawe oo ku adkeysanaya in si shuruud la’aan ah loo fasaxo kursigii...
Guudlaawe oo ku adkeysanaya in si shuruud la’aan ah loo fasaxo kursigii Fahad Yaasiin
War saxaafadeed kasoo baxay Dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo looga hadlay markii ugu horreesay go,aankeeda ku aadan Kursigii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu kasoo qaatay Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegtay in aad uga xuntahay hakinta sharci darrada ah ee lagu sameeyay Kursiga HOP086 oo deegaan doorashadiisu tahay Dowladda Hirshabeelle.
Qoraalka Hirshabeelle kasoo baxay ayaa lagu cadeeyay in doorashada kursigaas loo maray hannaan waafaqsan Heshiiskii 17-ka Sebteembar 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka oo sax ah, goobjoogna ay ka ahaayeen Gudiyada SEIT, FEIT iyo Gudiga xalinta khilaafaadka islamarkaana wax cabasho ah aysan ka imaanin beesha leh kursigaas iyo murashaxiintii ku tartantay.
“Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxay cadeeyneysaa in doorashada kursigaas loo maray hannaan waafaqsan Heshiiskii 17-ka Sebteembar 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka oo sax ah, goobjoogna ay ka ahaayeen Gudiyada SEIT, FEIT iyo Gudiga xalinta khilaafaadka, wax cabasha ahna aysan ka imaanin beesha leh kursigaas iyo murashaxiintii ku tartantay sidaas darteedna ay natiijadiisu tahay mid sax ah.” Ayaa lagu yiri War saxaafadeedka kasoo baxay DG Hirshabeelle.
Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa ka ka digtay tallaabooyinka ay sheegtay in uu gudiga FEIT ku xagal daacinayaan dhameestirka doorashooyinka dalka.
Sidoo kale, Hirshabelle ayaa markale cadeysay in kursiga tirsigiisu yahay HOP086 aysan jirin wax habraac qaldan ah balse loo heysto dano siyaasadeed, iyadoona taasi ay sabab ugu dhigtay Hirshabeelle kadib markii xalay gudiga FEIT uu shaaciyay in kuraastii lala hakiyay kursiga HOP#086 ay fasaxeen labo ka mid ah, iyadoo arrintaas ku tilmaamtay inay tahay anigaa qabsaday anigaana fasaxay tasoo ay xustay inay muujineeyso kutakrifal awoodeed.
Uga dambeeyn, DG Hirshabeelle waxay ugu baaqday Guddiga FEIT iney fasaxaan kursiga tirsigiisu yahay HOP086 ee uu hore ugu soo baxay Agaasimihii Hay’adda NISA ee uu xilka ka qaaday Rooble sidoo kalena Madaxweyne Farmaajo uu u magacowday Latalyaha dhanka amniga.
“Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxay ugu baaqaysaa Gudiga FEIT iney fasaxaan kursiga tirsigiisu yahay HOP086 dhowraana heshiisyadii Madasha Watashiga Qaran si looga fogaado waxkasta oo dib udhac u keeni karo doorashada Dalka.” Ayey ugu dambeyn ku tiri war saxaafadeedkeeda Hirshabeelle.
Qoraalka ah kasoo baxay Maamulka Hirshabeelle ayaa kusoo aadaya, xili Guddiga FEIT ay shaaciyeen in xal laga gaaray tabashadii ay qabeen Maamulka Koofur Galbeed kadib markii loo fasaxay Kuraas hore looga hakiyay sidoo kalena uu Guddiga FEIT ku dhawaaqay in dib loogu laabanayo kuwaas oo tirsigoodu yahay HOP#103, HOP#204 iyo HOP#154 oo lagu doortay Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Guddiga ayaa xalay shaaciyay in Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ay u fasaxeen kuraasta kale ah HOP#204 iyo HOP#103 kuwaas oo qeyb ka ahaa kuraas ay tabasho ka qabeen Madaxda Koofur Galbeed, balse guddiga ayaa sheegay in seddexdii kursi uu mid kasoo laabtay kaas oo doorashadiisa lagu celinayo maadama doorashada kursigaasi oo ah HOP#154 ay u tartantay Gabar aan gaarin da’da qaangaarinka.
Dhinaca kale, Kursiga HOP#086 uu Magaalada Beledweyne kasoo qaatay Fahad Yaasiin waxaa Baarlamaankii 10-aad ku fadhiyey Xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir, halka Kurisga 103 oo uu Baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Guddooomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamaed Sheekh Cismaan Jawaari, balse loo doortay xildhibaan Maxamed Cali Xasan, inkastoo Prof Jawaari uu hore u sheegay in doorashada kursigaasi uu ka gudbiyay dacwad ka dhan ah, balse ay haatan ansixiyeen hanaankii ay doorashadiisa ku dhacday Kursiga HOP#103 Guddiga FEIT, maadaama ay cadaadis kale duwan ay kala kulmeen kuraasta ay u fasaxeen Maamulka Koofur Xubnaha Beesha Caalamka.
Previous articleGuddoomiyahii hore ee Waxbarashada Gobolka Hiiraan oo Caawa lagu dilay magaalada Baledweyne
Next articleQabanqaabada xaflada dhaarinta Xildhibaanada oo hada ka socota Afesyooni
Shir nabadeyn & dib heshiisiin ah oo beelo dagaalay looga...